38 Zvino munguva iyi Judha paakabva kuvana vababa vake, akadzika tende rake pedyo nomumwe murume muAdhuramu,+ ainzi Hira. 2 Judha akaona mwanasikana womumwe muKenani+ ikoko, uye murume wacho ainzi Shua. Naizvozvo akamutora akarara naye. 3 Akava nepamuviri. Gare gare akabereka mwanakomana, murume wacho akamutumidza kuti Ere.+ 4 Akavazve nepamuviri. Kwapera nguva yakati akabereka mwanakomana, akamutumidza kuti Onani. 5 Pane imwezve nguva akabereka mwanakomana, akabva amutumidza kuti Shera. Zvino murume wacho akanga ari kuAkzibhu panguva yaakamubereka.+ 6 Kwapera nguva yakati, Judha akatorera Ere dangwe rake mudzimai, ainzi Tamari.+ 7 Asi Ere, dangwe raJudha, akava akaipa pamberi paJehovha;+ nokudaro Jehovha akamuuraya.+ 8 Naizvozvo Judha akati kuna Onani: “Roora mudzimai womukoma wako, urare naye, umuitire zvaanofanira kuitirwa nomuramu uye umutsire mukoma wako vana.”+ 9 Asi Onani aiziva kuti vana vacho vaisazova vake;+ saka paairara nomudzimai womukoma wake, airasira urume hwake pasi kuti arege kupa mukoma wake vana.+ 10 Zvino zvaakaita zvakanga zvakaipa pamberi paJehovha;+ nokudaro akamuurayawo.+ 11 Naizvozvo Judha akati kuna Tamari muroora wake: “Gara uri chirikadzi mumba mababa vako kusvikira Shera mwanakomana wangu akura.”+ Nokuti akati: “Iyewo angafa sezvakaita vakoma vake.”+ Naizvozvo Tamari akaenda, akaramba achigara kumba kwababa vake.+ 12 Nokudaro mazuva akava mazhinji, mwanasikana waShua, mudzimai waJudha,+ akafa; uye Judha akachengeta nguva yokuchema.+ Pashure paizvozvo akaenda kuvaveuri vemakwai ake, kuTimna,+ iye naHira shamwari yake muAdhuramu.+ 13 Tamari akabva audzwa kuti: “Tarira tezvara vako vari kuenda kuTimna kunoveura makwai avo.”+ 14 Naizvozvo akabvisa nguo dzouchirikadzi hwake, akafuka chari, akazvifukidza, akagara pasi pasuo reEnaimu, iri pamugwagwa unoenda kuTimna. Nokuti akaona kuti Shera akanga akura asi akanga asina kupiwa kuna Shera kuti ave mudzimai wake.+ 15 Judha paakamuona, akabva afunga kuti ihure,+ nokuti akanga afukidza chiso chake.+ 16 Naizvozvo akatsaukira kwaari pamugwagwa akati: “Ndapota, ndibvumire kurara newe.”+ Nokuti haana kuziva kuti akanga ari muroora wake.+ Zvisinei, akati: “Muchandipei kuti murare neni?”+ 17 Iye akati: “Ndichatumira mbudzana inobva paboka rezvipfuwo.” Asi akati: “Muchandipa chokumbofanobata kusvikira maitumira here?”+ 18 Akati: “Chokumbofanobata chandichakupa chii?” iye akati: “Rin’i yenyu yokusimbisa+ nayo netambo yenyu netsvimbo yenyu iri muruoko rwenyu.” Akabva amupa izvo, akarara naye, iye akava nepamuviri pake. 19 Pashure paizvozvo akasimuka, akaenda, akabvisa chari yake, akapfeka nguo dzouchirikadzi hwake.+ 20 Zvino Judha akatumira mbudzana noruoko rweshamwari yake muAdhuramu+ kuti adzorerwe chokumbofanobata kubva muruoko rwomukadzi wacho, asi haana kumbomuwana. 21 Akabvunza varume venzvimbo yake, achiti: “Pfambi iya yepatemberi yaiva muEnaimu pamugwagwa iri kupi?” Asi vakaramba vachiti: “Munzvimbo ino hamuna kumbova nepfambi yepatemberi.”+ 22 Akazodzoka kuna Judha akati: “Handina kumbomuwana uyezve, varume venzvimbo yacho vati, ‘Munzvimbo ino hamuna kumbova nepfambi yepatemberi.’” 23 Naizvozvo Judha akati: “Ngaazvitore, kuti tirege kuzvidzwa.+ Zvisinei, ndatumira mbudzana iyi, asi iwe—hauna kumbomuwana.” 24 Zvino inenge mwedzi mitatu gare gare, Judha akaudzwa kuti: “Tamari muroora wako akahura,+ uye tarira avawo nepamuviri+ pokuhura kwake.” Judha akati: “Mubudisei apiswe.”+ 25 Sezvaakanga achibudiswa, akatumira shoko kuna tezvara vake, achiti: “Ndine pamuviri pomurume ane izvi.”+ Akatizve: “Ndapota, ongororai+ kuti izvi ndezvaani, rin’i yokusimbisa nayo netambo netsvimbo.”+ 26 Judha akabva azviongorora akati:+ “Iye akarurama kundipfuura,+ nokuti handina kumupa mwanakomana wangu Shera.”+ Haana kuzomborarazve naye.+ 27 Zvino paaisununguka, mapatya aiva mudumbu make. 28 Uyezve, paakanga achisununguka mumwe akatambanudza ruoko rwake, nyamukuta akabva atora kachira katsvuku akakasungirira paruoko rwake, achiti: “Uyu atanga kubuda.” 29 Paakangodzorera ruoko rwake, munun’una wake akabva abuda, zvokuti nyamukuta akati: “Unorevei neizvi, kuti wazvitsemurira masuo?” Nokudaro akatumidzwa kuti Perezi.+ 30 Mukoma wake aiva nekachira katsvuku paruoko rwake akazobuda, akatumidzwa kuti Zera.+